गणित सिकाइ सुधार्ने महिला शिक्षक समाजको यो जुक्ति ! – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
गणित सिकाइ सुधार्ने महिला शिक्षक समाजको यो जुक्ति !
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार महिला शिक्षक समाज
काठमाडौं । गणित विषयको सिकाइ सुधार्न महिला शिक्षक समाजले नयाँ जुक्ति निकालेको छ । समाजले प्रतिनिधि रुपमा उपत्यकाका २५ विद्यालयका २५ जना मावितहका गणित शिक्षकहरुलाई ४ दिने गणित शिक्षण सिकाइ तालीम दिएको हो ।
यसैगरी, सो ४ दिने कार्यशालामा गणित विषयको आधार मजवुत कसरी पार्ने, हौसलायुक्त सिकाइ कसरी गर्ने, गणितलाई विद्यार्थीहरुको आकर्षण र रोजाइको विषय कसरी बनाउने भन्ने बारेमा शिक्षकहरुलाई व्यवहारिक सीप दिइएको महिला शिक्षक समाजकी उपाध्यक्ष एवं पद्मकन्या माविकी प्रअ रिता तिवारीले जानकारी दिइन् ।
कर्यशालापछि आफूलाई आफ्नो ग्णित सिकाइका परम्परागत विधि पुरानो लागेको स्वीकार्दै अब इन्टरनेटबाट नयाँ नयाँ विधिहरु सिक्दै सिकाउँदै जाने उनले स्पष्ट पारिन् ।
अर्का सहभागी बुढानिलकण्ठ माविका गणित शिक्षक मनोज तामाङले अहिलेका विद्यार्थीहरु धेरै अपडेट रहेको अवस्थामा आफ्ना सिकाइका विधि पुरानो भइसकेको कार्याशालाले स्पष्ट पारिदिएको बताए । अब उनीहरुलाई नयाँ टेक्नोलोजीबाट सिकाउने र यसबारे विद्यालयका अन्य शिक्षकहरुलाई पनि जानकारी गराउने उनले स्पष्ट पारे ।
विहीवार देखि शुरु भएको कार्यशालाको आइतवार समापन गरिएको हो ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइमा देशभर गणित विषयको नतिजा खस्किएको अवस्थामा गणित विषयको शिक्षण सिकाइलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर कार्यशाला आयोजना गरिएको महिला शिक्षक समाजकी अध्यक्ष एवं निलबाराही मावि कालीमाटीकी प्रअ डा. जानुका पौडेल नेपालले जानकारी दिइन् ।
गणित विषयको सन्दर्भमा रहेको हौवा घटाएर यसलाई कसरी रमाइलोसँग सिकाउन सकिन्छ भनेर शिक्षकहरुलाई जानकारी दिन यस्तो कार्यशाला आयोजना गरिएको र यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने डा. नेपालले स्पष्ट पारिन् ।
अब शिक्षकहरुले ४ दिन कार्यशालामा सिकेका कुराहरु विद्यालयमा गएर अन्य शिक्षकहरुलाई पनि सिकाउने उनले बताइन् । ‘अब कक्षाकोठाको सुधारमा केन्द्रित रहँदै यस्ताखाले सिकाइ तालीम सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्छौं’ – डा. नेपालले भनिन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं युनेस्कोको सहयोगमा महिला शिक्षक समाजले पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
२०७६ साउन १२ गते २०:०५मा प्रकाशित